अमेरिकामा नेपाली काँग्रेसका समर्थकहरू भक्कानिय - Durbin Nepal News
दूरबिन नेपाल १२ जेष्ठ २०७६, आईतवार ०६:२८
छायाबाट उठाएको नेपाली काँग्रेसको चहकिलो झण्डालाई इङ्गित गर्दै ने वी सङ्घका पूर्व महामन्त्री डाक्टर यादव पण्डितले भने “अँध्यारोमा छ तर काँग्रेसको झन्डा उठाउन मनचाही छ । हो त्यसलाई चाही मैले गैह्र आवासीय मूलका नेपाली काँग्रेस समर्थकको प्रतिनिधि चित्रको रूपमा लिएको छु ।”
डाक्टर पण्डितको यो भनाइ सुन्दा नेपाली काँग्रेसमा लामो समय काम गरेर विभिन्न कारणले अहिले अमेरिकामा बसोबास गर्दै गरेका कतिपय सभा हलमा भक्कानियका थिए ।
काँग्रेसलाई शक्तिमा फर्काउन के गर्नु पर्छ भन्ने प्रश्न राख्दै डाक्टर पण्डितले ए ! काँग्रेस अव पनि शक्तिमा फर्किनु पर्छ ? भन्ने व्यङ्ग्यात्मक उत्तर आउने बताए । पण्डितले थपे “पर्छ । त्यो भन्दा पहिला काँग्रेस सुध्रनु पर्छ । पहिला पनि काँग्रेस सत्ता र शक्तिमा थियो । अपेक्षित काम गर्न सकेन । अव शक्तिमा पुग्दा त्यो दोहोरिन दिनु हुन्न ।”
काँग्रेसले सुधार गर्नु पर्ने कमजोरी माथि पनि पण्डितले चर्चा गरे । भ्रष्टाचार, पद लोलुपता, पार्टीको आधारभूत सिद्धान्तबाट विमुख भएको उदारण सहित उनले तर्क पेस गरे । “यस भित्र आर्थिक नीति , ब्यक्तिक आचरण , जीवन ज्यूने शैली पनि पर्छ ।” पण्डितले भने “हामीले भेटेका, सङ्गत गरेका कुरानी गरेका काँग्रेस कतिपय नेताको जीवन कथामा पढे जस्तै छ । किसुन जी, सुशील कोइराला, भीम बहादुर तामाङ, लगायत थुप्रै नेताको जस्तो आदर्श र सरल जिन्दगी जिउन पनि सम्भव छ र भन्ने लाग्छ । तर अहिले काँग्रेस पार्टी भनेर सम्झने बित्तिकै आम मानिसको मनमस्तिष्कमा आउने इमेज चाही यी आदर्शवान नेताको भन्दा ठिक उल्टो छ । जो–जो काङ्ग्रेसबाट फाइदा लिएर बिग्रिए । सुविधा भोगी वने । यिनै खराब पात्रले बिताएको विलासी जीवन शैली जस्तो देखिन्छ । यसले हामी प्रिन्सिपल्लि र जीवन ज्यूने दुवैबाटोमा बिग्रिएको भन्ने देखिन्छ । सुध्रिनु पर्ने बाटो मध्ये यो पनि एउटा हो ।”
कार्यक्रममा डाक्टर अर्जुन बनजाडे, डाक्टर दुर्गा दाहाल, भुपाल लामिछाने र नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिकाका केन्द्रिय सदस्य चन्द्र धितालले नेपाली काँग्रेसमा देखिएको कमजोरी र सुधार गर्नु पर्ने पक्षका विषयमा चर्चा गरेका थिए ।
नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिकाका सचिव ईश्वर सापकोटाले भने “हिमाल पहाड तराइ मधेस नेपाली काँग्रेस भन्ने जागरण अभियान देश विदेशमा शूरु भएको छ । देश बाहिर पहिलो पटक अमेरिकाको नदर्न क्यालिफोर्नियामा दिग्गज वर्गको उपस्थितिमा कार्यक्रम गरी स्वयत पत्रको रूपमा पार्टी कार्यालयमा पठाऊ भनेर कार्यक्रम गरिएको हो ।” कार्यक्रम नेपाली जनसम्पर्क समिति नदर्न क्यालिफोर्निया च्याप्टरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण खनालले सञ्चालन गरेका थिए ।
१२ जेष्ठ २०७६, आईतवार ०६:२८ मा प्रकाशित